Agents sales, Iinkonzo zeMali Job Inkcazelo / Imbopheleleko Sample And Functions - JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Agents sales, Iinkonzo zeMali Job Inkcazelo / Imbopheleleko Sample And Functions
Jacob Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga 4 izimvo 1,530 Views
Ukukhuthaza-Iinkonzo zemali, ezifana umzekelo mortgage, levy, notyalo ingcebiso kubathengi zamaziko zebhanki kunye namashishini yenkampani.
Yenza isigqibo iinkonzo zemali iimfuno shoppersA nokulungiselela iingcebiso ukunika ababoneleli ezijoliswe ezi mfuno.
Qhagamshelana basenokuba ngabaxhamli ukubonelela izibakala nokuchaza izisombululo ezifundiswa.
Ethengisa iimpahla okanye iinkonzo, impahla, ezifana trust, okanye ukuhlola iinkonzo imveliso.
Lungiselela izahlulo okanye iintlobo ukufeza ingeniso.
Zuza amathuba evela Isiphakamiso kuzisa, abaxhasi zakutshanje industrial, okanye iintlanganiso ingeniso okanye ishishini.
Ukuvavanya utyekelo inkampani ukucebisa abathengi malunga nokunyuka kulindelwe.
Yenza ubonisa on-kwiinkonzo zemali kwiikomiti nezilawulayo ukuthenga ezintsha.
Ukuvavanya iingeniso kunye nemirhumo amalungiselelo ukumisela nenzuzo lowo waqhubeka.
Task okungu Need
Ukufunda izivakalisi Isicatshulwa-Ukuqonda nemihlathi ebhalwe amaphepha ezinxulumene nomsebenzi.
Active-Ukuphulaphula-To into nabanye-abantu bathi ukunikela ingqalelo epheleleyo,, ukuthatha ixesha namandla ukuqonda iingongoma eyenziwayo, ukubuza imiba efanelekileyo, kunokuba kokuphazamisa ngamaxesha ezingafanelekanga.
Publishing-Ibhalwe phantsi kungekhona nje ezingamfanelanga iimfuno ababukeli ukuthetha ngendlela eyiyo,.
Ukuxoxa-Ukuthetha nabanye ukuba ukwabelana data ngempumelelo.
Mathematics-Isebenzisa izibalo ukulungisa iingxaki.
Uphando-Ukusebenzisa imithetho elawulwa kunye nezisombululo ukulungisa iingxaki.
Critical Ukucinga-Ukusebenzisa umgwebo nengcinga ukuchonga izakhono kunye nengeloncedo ezinye ababambeleyo, izigqibo okanye iindlela kwimiba.
Active Learning-Knowledge nokunaba leefekthi ukuba ezintsha malunga zombini ekusombululeni iingxaki kunye kwezigqibo okhoyo elizayo.
Ukufunda Strategies-ngokuqasha icholwa izenzo coachingOReducational kunye neenkqubo ezifanelekileyo ingxaki eyalela okanye xa ekufundeni kwemiba ezintsha.
Monitoring-Monitoring / Ukuhlola ukusebenza kwamashishini, nabanye abantu, okanye wena siqwalasele amanyathelo okulungisa okanye ukuvelisa izinto.
Social Perceptiveness-Ukuba abazi kwabanye’ iimpendulo njengoko benza ukuba kutheni usabela nokuqonda.
izenzo Control-buyatshintsha ngokunxulumene amanyathelo othersI.
Azithenge-ekukholiseni abanye ukuphucula imikhwa okanye ubuchopho babo.
Iingxoxo-Ukuthatha abanye ngokuhlangeneyo kwaye ufuna ukwenza ibuya.
abanye Ukuncedisa-Ukufundisa HOWTO ukwenza into.
Orientation-Ngokuqinisekileyo Service ekufuneni iindlela ukunceda abantu.
Advanced ukusombulula iingxaki-zokwahlula nemiba enzima kunye nolwazi uphando ephathelene ukuvelisa sihlolisise ezinye nokuzalisekisa iinketho.
Operations iimfuno ngumba into Evaluation-Ukuhlaziya ukwenza isimbo.
Engineering izixhobo okanye ukuvelisa technologies ukusebenza umntu kufuna Design-Ukutshintsha.
Izixhobo Ukukhethwa-isigqibo uhlobo kwezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo kakhulu ukwenza umsebenzi.
iingcingo Izavenge-Kufakwa, izixhobo, iimveliso, okanye iipakethe ukuhlangabezana specs ngokubanzi.
-Kokuqamba izicelo computer ngenxa yezizathu ezahlukeneyo.
Operation Tracking-Ukubona uvavanyo, iminxeba, okanye iimpawu ezahlukileyo ukuqinisekisa sombane ngoku asebenza ngempumelelo.
Ukuqhuba imisebenzi kwezixhobo okanye izixhobo Control-Ukulawula.
Izixhobo Ulondolozo-Ukwenza eso kuyinto eqhelekileyo kwizixhobo nokuchonga xa.
Zokusombulula-Ukuchonga izizathu iimpazamo ukusebenza uze ukhethe oko ulwalathiso ngayo nayiphi na kuyo.
izixhobo okanye iindlela ukusebenzisa iindlela kubalulekile ukulungisa-Balungisa.
Quality-Control Examination-Ukwenza uvavanyo nohlolo impahla, izisombululo, okanye imisebenzi ukuze azivele esemagqabini okanye ukusebenza.
Ubulumko kwezigqibo-Ukuthathela ingqalelo imirhumo jikelele kunye iingenelo amanyathelo wenkukuma khetha eyona efanelekileyo.
Systems Analysis-Ukumisela inkqubo kufuneka enze utshintsho nje ngayo kwiimeko indlela, amashishini, kunye nokusingqongileyo sinokuchaphazela iinzuzo.
Ndlela Uhlalutyo-Ukuchonga amanyathelo okanye izalathi si zokunikwa yokusebenza kwenkqubo kunye kuthelekiswa neethagethi kumatshini olufanelekileyo okanye amanyathelo afunekayo nzulu ukuze kuphuculwe ukusebenza.
Time Management-Ukulawula mzuzu zabanye kwaye oneis ixesha lobuqu.
Imisebenzi Imali-Ukufumanisa indlela iidola luza kuhlala lusenziwa ukufumana umsebenzi owenziwa, kunye neentengiso mayelana nala inkcitho.
Imisebenzi ye Materials Imithombo-Ukufumana nokubona ukuba ukusetyenziswa ifanelekileyo of kwimveliso, kunye nezinto amacandelo afunekayo kakhulu ukwenza ethile asebenza.
Ulawulo lwabaSebenzi Resources-ejolise abantu ngoxa, iyafuna, kanye umsebenzi nokukhuthaza, emisela abantu phezulu lo msebenzi.
Izidingo Education Experience Izidingo
Level High School (okanye kuGedaliya okanye High-School ukulingana Certification)
Link kaThixo Stage (okanye ibakala unyaka-EZIMBINI ezongezelelweyo)
phezu 2 iminyaka, kufika yaye kubandakanya iminyaka abaliqela
Career Authority Imiqathango Skills
Impumelelo / Energy – 92.45%
nenamandla – 91.65%
Matter ngokuphathelene Abanye – 93.53%
Ulungelelaniso Social – 88.84%
Ukuzibamba – 94.37%
Ulwenziwo / Mobility – 93.13%
uzinzo – 97.80%
Ukuqaphela Iinkcukacha – 94.80%
inkululeko – 92.80%
Intuthuko – 87.39%
sicinga – 88.52%
UTshazimpuzi 25, 2019 e 7:20 pm
Certificate (SSC) yokuhlola. Secondary School Certificate is the complete type of
Pingback: The Future Hold For Cna Jobs – veg-imfihlakalo